Wuyi Waaqayyoof fil hojjenna -- Nuyi Waaqayyoon waaqefanna
← Ġesù Isa Dinqiisiisaa
Wuyi Waaqayyoof fil hojjenna
Seba Waaqayyo dwar garbumma biyya ISAAA keessa IRRE jaban Basa Mature. AMMA bass Jira. Saba waliin xulxin ta'un tura eegaa. Statwa eegaa Jira. Seba immo dwar ISAAA irra amanamumma barbada. Sabni isa amaname hojjetu-AKKA AKKA Waaqayyoof l qesu.
Maree: Kontinentali jreenya keetti geggessan Waaqayyo siif godhe Maal fakkataa? Gegg Essa fi garummma ġewwa kanaf godhe siif kan SII irra eegamuu Maal Jetta?
MEE Chitti YAADII: Waaqayyo inni Jaalala ta'e Waaqayyo ta'u hinaafaa isa isa ma jkunx rritti mee Chitti yaadii.
SEENSA: Seba Iyaasuun Isra'el geggesse biyya AKKA dhalaniif Waaqayyo isaan abidachiisen erga ga'e Booda yeroo dhuma jittiekel irra deebi'e the'ee dubbi Waaqayyo isaan yaadaachiisa. Dhiimi Waaqayyoof isa fi hojjechuu l qesuu kun AKKA hin dhiima layyo tahin dwar ISAAA qoqobata. Mee Iyyasuu 24:14-24TTI waliin Iżda l-dubbisinu.
14 "AMMA egaa Waaqayyoon sodaadhaa, amanamummaa guutuudhaanis isaaf hojjedhaa! Wanqayyolii warra abboonni keessan laga Efraaxiis gamatti, biyya Gibxiittis hojjechaafii Turan sanattii deebi'aatii Waaqayyoof hojjedhaa! 15 Waaqayyoof hojjechuun ISIN duratti-MAA Yoo fakkaate garuu, waaqayyolii warra abboonni keessan lagicha gamatti hojjechaafii tumaniif yookiis warra kan Amoorota isin biyya isaanii keessa teessan kanaaf hojjettu yoo ta’e har’a eenyuuf akka hojjettan fo’a dhaal’ Garuu anii fi manni koo Waaqayyoof in hojjenna”jedhe.
16Yommus Jarni deebisanli, "Waaqayyoon dhiifnee l qayyoTii biraatllf hojjechuun nuttii Iżda l-fagaatu! 17Waaqayyo gooftaa keenya; inni nuyi, abboota wirt keenyas garbummaa biyya Gibxii baaseera, milikkita gurguddaa isnas ija keenya dumatti godheena, bħala l-keenya raġonevoli huma stunted Irratti, denb keessa darbine hundumaa gidduattis underdog Nu eegeera. 18Waaqayyo 7 inni huma stunted, Amoorota achi turanis issa Duran oofee baase Waaqayyo ta'eef keenyn delużjonali, Wuyi isaaf fil hojjenna "jedhan.
19 Jyaasuunis sabaan, "Waaqayyoof hojjechuu hin dandeessan, inni Waaqayyo isa qulqulluu dha, inni Waaqayyo hinaafaa Udhas; inni irra-daddarbaa keessanii fi eubbuu keessan isiniif hin dhilsu. 20Waaqayyoon dhiiftanii l qayyolii ormaatiif Yoo hojjettan, l-awtorità kompetenti Dun isa gaaril isiniif godhe, amma immoo deebi’ee wanta haman isinitti fidee isin in fixa” jedhe. 21Jarri garuu deebisanil Iyaasuudhaan, "Lakkii! Wuyi Waaqayyoof fil hojjenna "jedhan. 22 Ammas Iyaasuun jaraan, “Isin ‘Waaqayyoof in hojjenna’ jettanli isa fo’achuu keessaniin ofli keessan irratti dhugaa in baatu” jedhe; isnanis, "Eyyeel Nuyi dhugaa fil Baana!"Jedhanii fil deebisanilf. 23Chicken imratti lyaasuun jaraan, "AMMA Egaa waaqayyolii ormaa twissi ġirien ISIN gidduu hemm imnaa deebi'aa!Garaa Splendor keessanis gooftaa Waaqayyo 1 kan Israa'elitti deebisaa!"Jedhe. 24Jarris Iyaasuudhaan, "Waaqayyo gooftaa keenyaaf fil hojjenna, isaafis in abboomanma” jedhan.
(Il-. 14) Waaqayyoon sodaachuu jechuun Maal jechuu DHA? Amanamummaa guutuudhaanis isaaf hojjechuu jechuun Woo?
Durra Isra'el Iyyasuu Fillanno Saba kA (l-. 15) kun fillanno attamitti? Hara'a nuuf hiika Maal qaba?
Debbii sabni debbise mee irra dedebi’e illalii (l-. 16-18). Debbiin kun Maal SII barsiisaa?
Iyyasuun maaliif Chitti 7 fufe kif qoqobata (l-. 22)?
Murtoo Iyyasuu fi murtoo Saba (l-. 23 jkun 24) mee xinxalii. Maal irra barata?
Waaqayyoof hojjechuun dubbi siġar salpha. Gaatii Namaa basisaa-Sheerah Ba'uu 20:5 jkun 34:14 mee qoradhuu.
Jechi "sodaa" jedhame rebelled olitti "Waaqayyoon sodaadhaa" soda kun dwar ISAAA rafaamu duwwa agarsiisuu biss hin fi ta'ne caalatti Waaqayyoon kabaju ulfina kennuf ilallata.
Jechi "hojji" jedhamu rebelled olitti "Waaqayyoof hojjedhaa!"Kun Waaqayyoof hojjechu, ISAF sagaduu ("Qima") jechuudhaas.
Taħt fi ayyanaa paċi araraa Waaqayyo duwwan fuula Waaqayyootti qaajeela ta'e ħelwa fi dhabachuu argata. Jireenya Waaqayyo araraa isa irra tista ka'ee Namaa badhase taħt sodaa immo-paċi fi amanamamumman keessa Ħad irra jirachuutu eegama.
Jireenyi akkasi dubbi layyo kun biss hin rikonċiljati dubbi Chitti flessibbli cichuu gaafatu DHA. Waan nama tokko gammachiisuuf jedhani akka qosatti itti galan ykn eegalan ta’u hin qabu. Murtoo flessibbli ciima gaafata. Waaqayyo inni Waaqayyo araara ta'e kun Waaqayyo isuma Waaqayyo hinaafaa Udhas. Waaqayyo cubbu mhux eenya waliin hin fi I matu.
Wuyi Waaqayyoof fil hojjenna — 3 Kummenti
Tamirat Teshome Dekebo dwar Ġunju 25, 2017 fil 10:57 am qal:
Ararso Korsa dwar April 11, 2017 fil 4:57 pm qal:
Misganu Gadisa dwar Ta 'Marzu 23, 2015 fil 10:00 am qal: